Outside the Wire (2021) | MM Movie Store
ဒီနအေ့တှကျ Netflix ကထှကျရှိလာတဲ့ အလနျးစား Action, Fantasy ကားကောငျးလေး တဈကားကိုတငျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ အရငျဆုံးပွောခငျြတာကတော့ Anthony Mackie ပါဝငျထားပွီး . Damson Idris နဲ့အတူ ဒိတျဒိတျကွဲအပွိုငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ကားလေးပါ .
ဒီကားအတှကျလညျး ဘတျဂကျြကို အတျောအကုနျကခြံရိုကျကူးထားတယျလညျးသိရပါတယျ။2021 ရဲ့ အစဟာ မူဗီခဈြပရိသတျတှအေတှကျတော့ အတျောလေးကနြေပျစရာကောငျးလောကျမယျ့ကားကောငျးလေးတဈခြို့ထှကျရှိလာတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးကိုပွောရမယျဆိုရငျတော့ဟာ့ပျဆိုတဲ့ drone pilot တပျသားတဈယောကျဟာ drone ပဈခတျေမောငျးနှငျရာမှာအတျောလေးကြှမျးကငျြပွီးပဈမှတျကိုတိတိကကြပြဈခတျနိုငျတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Mission တဈခုမှာ သူ့ရဲ့ စိတျလောပွီးတဇှတျထိုးနိုငျတဲ့စိတျကွောငျ့ အမှားတဈခုကြူးလှနျမိပွီး . မိမိတပျဘကျကစဈသားတဈခြို့ရဲ့ အသကျပါ ပေးဆပျလိုကျရတာကွောငျ့ ဒဏျပေးခံရတဲ့အနနေဲ့ စဈဇုံတဈခုကိုအပို့ခံရပါတော့တယျ။
အဲ့ဒီ စဈစခနျးရောကျမှ လီယိုနဲ့တှပွေီ့းခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ Mission ကို ရပျတနျ့ရငျဆိုငျရမှာကို ပဈကှငျးပဈကှကျ အတိုကျအခိုကျတှနေဲ့ ရိုကျပွသှားတာကိုကွညျ့ရှုရမှာပါ။Anthony ဖနျတှကေတော့ အကွိုကျဖွဈဦးမှာမလှဲပါဘူး။
ဒီနေ့အတွက် Netflix ကထွက်ရှိလာတဲ့ အလန်းစား Action, Fantasy ကားကောင်းလေး တစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ Anthony Mackie ပါဝင်ထားပြီး . Damson Idris နဲ့အတူ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားလေးပါ .
ဒီကားအတွက်လည်း ဘတ်ဂျက်ကို အတော်အကုန်ကျခံရိုက်ကူးထားတယ်လည်းသိရပါတယ်။2021 ရဲ့ အစဟာ မူဗီချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ အတော်လေးကျေနပ်စရာကောင်းလောက်မယ့်ကားကောင်းလေးတစ်ချို့ထွက်ရှိလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟာ့ပ်ဆိုတဲ့ drone pilot တပ်သားတစ်ယောက်ဟာ drone ပစ်ခေတ်မောင်းနှင်ရာမှာအတော်လေးကျွမ်းကျင်ပြီးပစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Mission တစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့ စိတ်လောပြီးတဇွတ်ထိုးနိုင်တဲ့စိတ်ကြောင့် အမှားတစ်ခုကျူးလွန်မိပြီး . မိမိတပ်ဘက်ကစစ်သားတစ်ချို့ရဲ့ အသက်ပါ ပေးဆပ်လိုက်ရတာကြောင့် ဒဏ်ပေးခံရတဲ့အနေနဲ့ စစ်ဇုံတစ်ခုကိုအပို့ခံရပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီ စစ်စခန်းရောက်မှ လီယိုနဲ့တွေ့ပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ Mission ကို ရပ်တန့်ရင်ဆိုင်ရမှာကို ပစ်ကွင်းပစ်ကွက် အတိုက်အခိုက်တွေနဲ့ ရိုက်ပြသွားတာကိုကြည့်ရှုရမှာပါ။Anthony ဖန်တွေကတော့ အကြိုက်ဖြစ်ဦးမှာမလွဲပါဘူး။